मोडेल तथा व्यवसायिक शितलको लोभलाग्दो सफलता, अर्गानिक चुल्होमा साङ्गितीक कार्यक्रम देखि मार्सी चामलको भात सम्म
मानिस त्यसै पनि इच्चाभोगको भोको हुन्छ । आफ्नो सोचाइ र बुझाइ अनुसार अगाडि बढ्ने अधिकार आफैमा निहित हुन्छ । अरुले के गरेको छ ? आफुले त्यही गर्ने कि फरक ? यी प्रश्नको उत्तर मानिस आफैले गरेको कर्मले दिन्छ । अरुले गरेकै काम गर्नु पर्छ भन्ने छैन तर अरुले गरेकै अनुसारको काम गर्दा पनि फरक तरिकाले गर्न सकिन्छ । सच्चा मनले चाहेर गरेको कामले व्यवसायिक सफलता मात्र पाउदैन अरुको लागि उदाहरण पनि बन्न सक्छ ।
यस्तै उदाहरणिय व्यवसायको पर्याय बनेकी छिन धनकुटामा जन्म लिएर काठमाडौ लाई कर्मथलो बनाएकी शितल श्रेष्ठ ।उद्यमिको हिसाबले शितललाई चिन्नु पर्दा त्यत्रो धेरै उमेर पनि उनको भाको छैन । तर २७ वर्षीया शितलको व्यवसायिक कुशलता भने सबैको लागि प्रेरणादायी देखिन्छ । सुरुका दिनहरुमा उनको सपना मोडल बन्ने थियो । त्यही सपना पूरा गर्न २०६५ सालमा एलएलसी दिएर काठमाडौं आइन् । मोडल बन्ने रहर भए पनि काठमाडौंमा आएपछि त्यो सपना सजिलो रहेनछ भन्ने बुझ्दै गइन् । काठमाडौंमा बस्न थालेपछि शुरुको तीन–चार महिना नृत्यको प्रशिक्षण पनि लिइन् । केही म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ्ग गरे पछि उनको परिचय केही फेरियो । आफन्त र साथी सर्कल बाहेकका अरु मान्छेहरुले पनि उनलाई चिने तर सफल जिन्दगीको परिचय बनाएर समाजलाई दिने उदाहरणको भोक मेटिएन अनि मोडियो उनको बाटो ।भनिन्छ हजारौ सङ्ग सहयोग माग्दा एउटाले पनि सहयोग गर्दैन तर एउटा सङ्ग सल्लाह माग्दा सल्लाह दिने हजारौ हुन्छन ।
अरुको सल्लाहले तय गरिएको बाटोले पनि गन्तव्य भेटाउला तर सहज यात्रा नहुन पनि सक्छ । यस्ता कुराको हेक्का राम्ररी राखिन शितलले । काठमाडौमा सुविधा सम्पन्न होटल रेष्टुरेन्ट धेरै भएता पनि त्यही व्यवसायलाई फरक तरिकाले गर्ने सोच राखिन उनले अनि उपत्यकाको बत्तिसपुतलीमा सुरु गरिन अर्गानिक चुल्हो ।बितेको करिब एक/डेढ वर्षमा शितलले सन्चालन गरेको अर्गानिक चुल्होले आफ्नो छुट्टै परिचय स्थापित गरेको छ । एकछिन भए पनि शान्त वातावरणमा बसेर खाना खान चाहने फरक स्वादका पारखीहरुको गन्तव्य बनेको छ अर्गानिक चुल्हो । अर्गानिक चुल्हो सन्चालन गरेर उनले व्यवसायिक सफलता मात्र हासिल गरेकी छैनन, सेवाग्राहीहरुको धन्यवादको पात्र पनि बनेकी छिन । आफै पनि कलाकारिता क्षेत्र सङ्ग नजिक भएकोले गर्दा पनि उनको अर्गानिक चुल्होमा खाना खान दैनिक रुपमा कलाकारहरुको बाक्लै उपस्थिति हुने गर्दछ । गीति एल्बम बिमोचन, लोकार्पण, चलचित्रहरु शुभ मुहर्त लगायत पत्रकार सम्मेलन जस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्न पनि उत्कृष्ट स्थानको रुपमा मात्र नभै म्युजिक भिडियो र चलचित्र छायांकन गर्नु पर्दा पनि अर्गानिक चुल्होमा पारिवारिक वातावरणका साथमा सर्वसुलभ दरमा खानाको स्वाद चाख्न पाउने कारणले पनि एक पटक त्यहाँ पुगेका सेवाग्राहि आफू दोहोर्‍याएर जाने मात्र होइन अरु सामु पनि खुलेर प्रसम्सा गर्ने गर्दछन । जसको कारण हरेक दिन जसो नै उनलाई सेवा दिन भ्याइ नभ्याइ हुन्छ ।मीठो मुस्कान, मिजासिलो व्यवहार र स्वादिलो परिकारले गर्दा त्यहाँ पुग्ने जोकोहिले आफ्नै घरमा बनाएर खाएको खानाको स्वाद बिर्सिन सक्छन । अरु भन्दा फरक तरिकाले सेवाग्राहीको मन जित्ने शितलको यहि कला अर्गानिक चुल्होको अर्को विशेषता हो ।
चर्चामा आउनु अगाडि नै मार्सी चामलको भात प्राथमिकतामा
पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वमा पनि व्यापक चर्चामा आएको खाना हो मार्सी चामलको भात । अरु सामान्य खाना भन्दा केही फरक मात्र नभै स्वादिलो र स्वास्थ्यको लागि पनि लाभदायक भएकोले यस खानाको चर्चा नहुने कुरै भएन । शितलले आफ्नो अर्गानिक चुल्होमा मार्सी चामलको भातलाई मुख्य मेन्युमा राखेकी छिन । राजनितीक बृत्तमा पछिल्लो समय चर्चामा आएको भएता पनि उनको रेष्टुरेन्टमा यो खाना सुरुवात देखि नै रहेको थियो । उनले यो व्यवसाय सुरु गर्दा देखि नै जुम्ला देखि आफैले मार्सी चामल मगाएर सेवा प्रवाह गर्ने गरेकी छिन ।यस रेस्टुरेन्टमा १३ कर्मचारीहरुलाई समेत प्रत्यक्ष रोजगारी दिएर केटि मान्छेले के गर्न सक्छ र भन्नेहरुलाई शितलले गतिलो झापट दिएकी छिन । ठूलो एरियामा फैलिएको र पर्याप्त पार्किङ्गको व्यवस्था समेत रहेको रेस्टुरेन्टमा सेमिनार, पार्टीलगायत बिहान चियादेखि रातिको खानासम्मको व्यवस्था अर्गानिक चुल्होमा उपलब्ध छ ।रेस्टुरेन्ट बिहान ८ बजेदेखि राति १० बजेसम्म खुल्ने गर्छ । रेस्टुरेन्टमा अन्य कर्मचारीको साथमा शितल आफैँ पनि एकदमै खट्ने गर्छिन् । उनको यो खटाइ रेस्टुरेन्टमा उपलब्ध परिकारको स्वाद र सेवाग्राहीलाई दिने सेवामा कमि नआओस भनेर हुने गर्दछ । रेस्टुरेन्टको वातावरण पनि शान्त छ । राजधानीको कोलाहलबाट एकैछिन भएपनि शान्त र हरियाली वातावरणको विचरणका लागि अर्गानिक रेस्टुरेन्ट एक विकल्प हुनसक्छ ।
‘यदि फराकिलो सोच राखेर काम गरियो भने जे काममा पनि सफल भइन्छ,’ शितल बताउँछिन्, ‘साँघुरो सोच राखेर काम गर्न खोजियो त्यो काममा कहिल्यै अघि बढ्न सकिन्न ।’ कुनै पनि काम गर्दा धैर्य हुनु पनि जरुरी रहेको शितलको तर्क छ । आजको यो अवस्था सम्म आउनको लागि असल मनले साथ र सहयोग दिने साथीहरु उनको धन्यवादका पात्र बनेका छन ।
शितलले गरेको काम व्यवसायमा लाग्नेका लागि उदारणीय बन्न सक्छ । मेहनत, धैर्‍यता, लगनशिलता र अनुसाशनलाई सिरोपर गरेर सफल जिन्दगी जिउन चाहनेहरुका लागि शितलको मेहनतले आर्जेको सफलता राम्रो पाठ बन्न सक्छ ।